Wararka Maanta: Jimco, July 6 , 2012-Xarakada Al-shabaab oo guulo ka sheegatay Iskahorimaadyo ay ciidamada Itoobiya kula gashay Gobolka Bakool
Afhayeenka ciidamada ee Al-Shabaab, Sheekh C/casiis Abuu-Muscab ayaa sheegay in xoogaggoodu ay weerarro ku qaadayeen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay gaadiid ay wateen ciidamada Itoobiya oo marayay inta u dhexeysa degmooyinka Xudur iyo Ceel-barde.
"Saddex maalmood ayaan jid-gooyooyin u dhigtay gaadiid ay wateen ciidamada Itoobiya; hadda sahaydii u kala gudbi jirtay way joogsatay," ayuu yiri Sheekh Abuu-Muscab oo sheegay in howgalladan ay socon doonaan inta ay hadafkooda ka gaarayaan.
Afhayeenku wuxuu intaas ku daray inay jid-gooyooyinkaas khasaare xooggan ku gaarsiiyeen ciidamada Itoobiya iyo gaadiidkooda, balse ma sheegin tirada ciidan ee ay ku dileen iyo khasaaraha dhankooda soo gaaray.
Dagaal dhawaan ka dhacay duleedka degmada Xudur ayaa waxay saraakiisha DKMG ah ee ku sugan gobolkaas sheegeen inay ku dileen dagaalyahanno badan oo Al-shabaab ka tirsan.
Sidoo kale, afhayeenka howgallada ee Al-shabaab ayaa sheegay in sidoo kale ay dhibaatooyin gaarsiiyeen, wuxuuna kula taliyay Kenya inay isaga baxdo Soomaaliya inta aan dhibaatooyin ka badan kuwa hadda gaaray la gaarsiin.
Ma jiro hadal kasoo baxay dhinaca dowladda KMG ah, Kenya oo AMISOM ka tirsan iyo kuwa Itoobiya oo ku saabsan dagaallada ay Al-shabaab guulaha ka sheegatay, iyadoo aysan sidoo kalena jirin ilo wareedyo madax-bannaan oo arrintan xaqiijinaya.
7/6/2012 5:01 AM EST